Febroary 28, 2017	tourismspot	Leave a comment	Na dia ny mpanapaka Street Gardens dia ho an'ny daholobe faritra lohasaha izay voahodidina Edinburgh Castle any avaratra ary ny lehibe Street Edinburgh any atsimo. Zavatra tsy Garden dia manana telo toko. Ity zaridaina eny an-dalana dia toerana izay manavaka ny Edinburgh ny Taloha sy Vaovao Town Ary izany koa dia toy izany famenon'ny faritra ho an 'ireo trano lehibe eto amin'ity tanàna ity. izany
Febroary 27, 2017	tourismspot	Leave a comment	Holyrood Palace na izany no tsara indrindra fantatra amin'ny anarana hoe Mary Queen ny Scots, dia ny State Apartments izay ampiasaina matetika amin'ny The Queen ho an'ny Fanjakana sy ny lanonana ofisialy voly. Ao amin'io lapa, ny mpitsidika sy ny fizahan-tany dia afaka hijery bebe kokoa noho ny 10 tsara tarehy toerana manan-tantara sy ny Fanjakana Apartments; ny tantaram-pitiavana tarehiny dia mitondra anao any amin'ny Holeyrood
Febroary 26, 2017	tourismspot	Leave a comment	Edinburgh Castle mitana anjara toerana lehibe teo amin'ny tantara Scottish toerana ny mpanjaka ho fonenana sy ho fanamafisana ara-tafika. Ity hetsika miaramila farany tao amin'ny 1745, ary avy eo dia mandra-taona 1920, dia ho an'ny tena fototry ny tafika britanika tany Ekosy. ankehitriny, lapa io no malaza indrindra sy ny fizahan-tany malaza toerana mahasarika tany Ekosy. Ny brooding sy ny hantsana
Febroary 25, 2017	tourismspot	Leave a comment	Millau Viaduct Tetezana naorina mba hanamaivanana ny kilometatra-ela ny fifamoivoizana congestionin isan-taona izay mahatonga ny fitohanan'ny fiara nitranga toy ny mpizaha tany manao ny fomba atsimo nandritra ny vanin-taona mafana, handeha ny lohasaha ho any amin'ny Millautown izay lasa malaza ao amin'ny A75 jamming Auto lalana. Ny fanorenana amin'ity tany ity dia tena sarotra toy izany faritra izany
Febroary 24, 2017	tourismspot	Leave a comment	The Royal harambato sy Park Bridge no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra ny fizahantany izay tsy maintsy hitsidika Isaky ny handeha ho any Colorado, Etazonian'i Amerika. Valan-javaboary ity manokana dia toy izany toerana lehibe izay tena mora ny hahatratra, izay afa-tsy minitra avy Canon City sy ny ora maromaro avy any Colorado Springs sy Denver. izany